Fikarohana momba ny firaisana Ian Stevenson, MD Twin Study-Plans Plan & Souls Past of Renewed amin'ny alàlan'ny Reincarnation - Fikarohana Reincarnation
Ian Stevenson, MD Twin Fianarana-Soul drafitra & Past Fiainana fifandraisana indray amin'ny alalan'ny Reincarnation
Article amin'ny Walter Semkiw, MD avy amin'ny ateraka indray
Ny fandinihana iray izay manaporofo fa mampifangaro antsika amin'ny olon-tiana avy amin'ny fahatongavana teo aloha dia misy karazana kambana 31 izay Ian Stevenson nandalina, izay nahitana fampahalalana ampy be momba ny kambana mba hanamarina ny fomban'izy ireo taloha.
Hitan'izy ireo fa rehetra ireo tranga ireo, misy ny 62 olona tsirairay, ny zaza kambana dia manana fifandraisana akaiky amin'ny fidiran'izy ireo taloha.
Ny karazana mpirahalahy taloha dia ny mpirahalahy, izay misy ny tranga 11 / 31 na 35%. Kambana iray mirahalahy dia kambana tamin'ny incarnations nialoha azy.
Amin'ny 9/31 na 29% amin'ny tranga kambana dia mpinamana, olom-pantatra na mpiara-miasa ny zaza kambana. Ny fifandraisan'ny mpianakavy hafa, toy ny zanak'olo-mpiray tam-po, dia 6/31 na 19% amin'ny tranga kambana. Tamin'ny 5/31 na 16% amin'ny tranga kambana dia nanambady tamin'ny taloha ny zaza kambana. Ity fampahalalana ity dia fehezina ao amin'ny tabilao etsy ambany: (1)
Fifandraisan'ny kambana taloha:
Namana, mpiara-miasa amin'ny orinasa-29%
Fifandraisan'ny fianakaviana hafa-19%
Drafitra mandritra ny androm-piainan'ny fanahy
Ireo fandinihana kambana ireo, ary koa ny tranga famonoana fianakaviana hafa dia mampiseho fa ny fanahy dia afaka mamolavola fahatongavana ao amin'ny tontolon'ny fanahy ary misafidy ny ray aman-dreny amin'ny fidirana ho tonga aza.
Kambana iray ao amin'ity fandinihana ity dia mampiseho ihany koa ny fomba mety hijanonan'ny fisehoan'ny tarehy tsy miovaova hatrany amin'ny androm-piainany. Izany dia misy ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ao Daw Aye Phyu | Ma Nyunt Nyunt San sy Daw Sapai | Ma San San Nyunt, izay atolotra ankavanana ny sariny. Tranga reincarnation kambana fanampiny misy fifandraisana manan-danja taloha dia omena etsy ambany:
Ny herin'ny fanahy: Novonoina ny kambana Tripathi, ary reincarnate indray rehefa kambana
Ilay mpikomy Sri Lankan Johnny sy Robert dia novonoina ary reincarnate tamin'ny ankizivavy kambana
Salan'isa fanodinana mitovy amin'ny fianakaviana izay nateraka indray ny rahavavy ho zazavavy kambana mitovy: ny tranga fandotoana ny pollack
Ny raibe sy renibe dia teraka indray amin'ny maha zazavavy kambana mirahavavy azy: tranga izay misy fiovana eo amin'ny lahy sy ny vavy, teraka ao amin'ny vatana vaovao Silamo ary miova finoana.
Nyein sy Gywin, teraka tamin'ny Andro mitovy tany Burma, izay nanambady ary maty tamin'iny andro iny ihany, niara-namindra tamin'ny maha zazalahy kambana izy
Miaramila Japoney roa any Burma dia nohavaozina ho zazavavy kambana Burmese, San ary Yin, mampiseho ny fomba handresena ny tena.
Ny vokam-panomanana ny fanahy dia misy amin'ny fifandraisana voafaritra
Ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia mampiseho koa fa ny fanahy dia afaka manomana androm-piainana mba hiaraka na dia tsy teraka ao amin'ny fianakaviana iray aza izy ireo. Ireo dia voalaza ao amin'ilay faritra Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana.
Ahoana no ifandraisantsika amin'ireo olona nokasaintsika mba ho miaraka? Ny valiny dia mino aho fa lahatra. Ao amin'ny famakafakana ireo raharaha momba ny fiainana taloha, dia hita fa manana ny hoavina mialoha na ny drafitry ny fiainana isika rehetra, izay mitondra antsika ho an'ireo olona izay heverintsika fa handany fotoana. Mba hahafantarako bebe kokoa ny fomba fiasan'ny faritany dia ampiasaiko ny fitantarany amin'ny dia iray.
Mieritrereta ny fiainanao ho fialan-tsasatra lavitra izay kasainao mialoha. Ianao no manapa-kevitra hoe iza no tadiavinao ary tokony hojerenao, aiza ianao no te handeha ary inona ireo zavatra tianao hotrandrahana. Atambatra ny fandaharam-potoananao amin'ny olona tianao aleha. Ianao, ny namanao karmic sy olona tiana dia manaiky ny drafitra mialoha ny nahaterahanao.
Rehefa tonga eo amin'ny fiainana ianao, ny lahatra dia miantoka fa hihaona amin'ny vondron'olona fanahy karmika ianao. Ny toe-javatra ho an'ny fifandraisan'ny karmika dia mety ho fianakavianay, araka ny voalazan'ny fanadihadiana kambana, ary koa ny fiainana asantsika sy ny fialamboly. Ireo toe-javatra ireo dia dingana ataontsika amin'ny tantara an-tsehatra ataon'izy ireo. Mampita jiro vaovao amin'ny fehezan'i Shakespeare io, "Ny sehatra rehetra dia sehatra avokoa."
Mihaona amin'ireo vondrona karma isan-karazany amin'ny fotoana samy hafa amin'ny fiainana izahay. Rehefa manana faniriana handray asa vaovao isika, handeha any amin'ny tanàna vaovao na hanao fikatsahana fialamboly vaovao, imbetsaka izany dia ampahany amin'ny anjarantsika nolalaovina. Ny toerana vaovao dia mitondra antsika amin'ireo vondrona karma na fanahy mila miaraka amintsika. Rehefa mihaona amin'ireo namantsika taloha isika, na dia mety tsy fantatsika aza ny momba ny fiainana taloha, dia manana fahatsapana haja na manintona antsika isika.
Reincarnation sy ny fitiavana tamin'ny fahitana voalohany: Fifandraisan'ny fiainana taloha
Ny fisehoan'ny "fitiavana amin'ny fahitana voalohany" dia ohatra iray amin'ny fomba ahafahan'ny fihetseham-po mampiaraka ireo olona izay nanao drafitra na fifanarahana hiaraka na dia talohan'ny nahaterahany aza.
Reincarnation sy safidy malalaka
Raha marina fa manana lahatra na drafitry ny fiainana isika dia tsy maintsy manontany tena raha manana safidy malalaka isika. Ny finoako dia na dia samy manana ny làlan-kaleha mialoha aza isika rehetra ary manolo-tena hanome voninahitra; manana safidy malalaka amin'ny zavatra ataontsika eny an-dàlana isika. Marina tokoa, ny fitomboana sy ny fivoaran'ny olombelona dia tsy nisy raha tsy nanana safidy malalaka. Ny olona sasany dia mety manana lamin-drafitra voarindra kokoa izay mametra ny làlan-kizorana, fa ny hafa kosa mety manana drafitra lalao tsy dia voarindra. Na izany na tsy izany, manana safidy malalaka isika amin'ny làlana alehantsika.
Déjà Vu sy Reincarnation
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana